AI နညျးပညာပါဝငျသညျ့ Toyota LQ Concept - Drive Myanmar
Home Concept Cars AI နညျးပညာပါဝငျသညျ့ Toyota LQ Concept
AI နညျးပညာပါဝငျသညျ့ Toyota LQ Concept
Toyota သည် Toyota Concept – i EV အား 2017 တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် Consumer Electric Show တွင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ၎င်းကို အခြေခံပြီး အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည့် Evolution of Concept – i အား 2020 တွင်ကျင်းပမည့် Tokyo Olympic အားကစားပွဲတော်တွင်ပါဝင်စေမည်ဟု ထိုစဉ်က တခါတည်းကြေငြာထားပါသည်။ New LQ Concept အား ယခုနှစ်တွင် ကျင်းပမည့် Tokyo Motor Show တွင် ထည့်သွင်းမိတ်ဆက်မည်ဖြစ်ပြီး Toyota မှ Yui ဟု အမည်ပေးထားသည့် ( A I – မှတ်ဥာဏ်စနစ် ) ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ Yui AI အား ယာဉ်၏ Instrument Panel ၏ အလည်တွင် 3D – Printed ဖြင့် တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ကာ ( Lives ) ဟု ခေါ်ဆိုမည်။ Yui သည် ယာဉ်မောင်း၏လှုပ်ရှားမှု အပေါ် Voice Command ဖြင့် တုန့်ပြန်စေခြင်း ၊ ယာဉ်တခုလုံး၏ လုံခြုံမှုကို ကောင်းစွာထိန်းချုပ် စေခြင်း ၊ အရေးပေါ်မီးများကို လိုအပ်ပါက Auto စီစဉ်စေနိုင်ခြင်း ၊ ထိုင်ခုံများလှုပ်ရှားမှုအတွက် လိုအပ်သည့် Power ကို Charging ဖြည့်သွင်းပေးခြင်း အပါအ၀င်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။ ယာဉ်မောင်းနွမ်းနယ်နေသည်ဟု Yui မှ သံသယရှိပါက ထိုင်ခုံ အပူ / အအေးကို လိုသလိုဖန်တီးပေးခြင်း Def – Con စနစ်ကို သုံး၍ ထိုင်ခုံအနေအထားကို သက်တောင့်သက်သာချိန်ညှိပေးခြင်း စသည့် Function များကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။ Yui AI အပြင် အခြားသော အဆင့်မြင့်နည်းပညာများ အနေဖြင့် – Organic LED instrument Augmented – reality HUD ၊ Level4အဆင့်ရှိသည့် Autonomous Driving ( Automated Vale System – ၎င်းစနစ်အတွက် Panasonic ၏ Camera နှင့် Sensors များကို အသုံးပြုထားပါသည် ) တို့ပါဝင်ပါမည်။ Toyota သည် LQ Concept အား 2020 Tokyo Olympic တွင် မိတ်ဆက် မောင်းနှင်ပြီးနောက် လူထုသို့ Road Show ပြသရန်လည်း စီစဉ်ထားပါသည်။
The LQ concept evolves Toyota’s Concept-i from the 2017 Consumer Electronics Show. The AI assistant Yui has expanded interactivity and control functions.
Toyota သညျ Toyota Concept – i EV အား 2017 တှငျ ကငျြးပခဲ့သညျ့ Consumer Electric Show တှငျ မိတျဆကျခဲ့ပွီး ၎င်းငျးကို အခွခေံပွီး အဆငျ့မွှငျ့တငျထားသညျ့ Evolution of Concept – i အား 2020 တှငျကငျြးပမညျ့ Tokyo Olympic အားကစားပှဲတျောတှငျပါဝငျစမေညျဟု ထိုစဉျက တခါတညျးကွငွောထားပါသညျ။ New LQ Concept အား ယခုနှဈတှငျ ကငျြးပမညျ့ Tokyo Motor Show တှငျ ထညျ့သှငျးမိတျဆကျမညျဖွဈပွီး Toyota မှ Yui ဟု အမညျပေးထားသညျ့ ( A I – မှတျဉာဏျစနဈ ) ပါဝငျမညျဖွဈသညျ။ Yui AI အား ယာဉျ၏ Instrument Panel ၏ အလညျတှငျ 3D – Printed ဖွငျ့ တှမွေ့ငျရမညျဖွဈကာ ( Lives ) ဟု ချေါဆိုမညျ။ Yui သညျ ယာဉျမောငျး၏လှုပျရှားမှု အပျေါ Voice Command ဖွငျ့ တုနျ့ပွနျစခွေငျး ၊ ယာဉျတခုလုံး၏ လုံခွုံမှုကို ကောငျးစှာထိနျးခြုပျ စခွေငျး ၊ အရေးပျေါမီးမြားကို လိုအပျပါက Auto စီစဉျစနေိုငျခွငျး ၊ ထိုငျခုံမြားလှုပျရှားမှုအတှကျ လိုအပျသညျ့ Power ကို Charging ဖွညျ့သှငျးပေးခွငျး အပါအဝငျလုပျဆောငျခကျြမြားစှာကို ဆောငျရှကျပေးနိုငျပါသညျ။ ယာဉျမောငျးနှမျးနယျနသေညျဟု Yui မှ သံသယရှိပါက ထိုငျခုံ အပူ / အအေးကို လိုသလိုဖနျတီးပေးခွငျး Def – Con စနဈကို သုံး၍ ထိုငျခုံအနအေထားကို သကျတောငျ့သကျသာခြိနျညှိပေးခွငျး စသညျ့ Function မြားကိုလညျး ဆောငျရှကျပေးပါမညျ။ Yui AI အပွငျ အခွားသော အဆငျ့မွငျ့နညျးပညာမြား အနဖွေငျ့ – Organic LED instrument Augmented – reality HUD ၊ Level4အဆငျ့ရှိသညျ့ Autonomous Driving ( Automated Vale System – ၎င်းငျးစနဈအတှကျ Panasonic ၏ Camera နှငျ့ Sensors မြားကို အသုံးပွုထားပါသညျ ) တို့ပါဝငျပါမညျ။ Toyota သညျ LQ Concept အား 2020 Tokyo Olympic တှငျ မိတျဆကျ မောငျးနှငျပွီးနောကျ လူထုသို့ Road Show ပွသရနျလညျး စီစဉျထားပါသညျ။
Previous articleAudi A6 All road အား U.S.A သို့ 2020 တှငျရောငျးခမြညျ
Next articleKIA ၏ Soul EV Model အသဈ
Hyundai ၏ Compact Pickup Sonata Cruz အား အမရေိကနျ Alabama ရှိ စကျရုံတှငျ တပျဆငျမညျ
ထူးခြားစွာထွက်ရှိလာသည့် 2021 Ford Mustang Mach – E
2021 Kia Optima အား K5 အနေဖြင့် တောင်ကိုရီးယားတွင် စတင်ရောင်းချမည်
၁% ကနေ ၁၀% အထူးလြှော့ဈေးတှနေဲ့ ရောငျးခသြှားမညျ့ Ford Myanmar ၏ Year End Sales
Hyundai ၏ Compact Pickup Sonata Cruz အား အမရေိကနျ Alabama ရှိ စကျရုံတှငျ...
Nissan ကားမြားကို ဝယျယူခွငျးဖွငျ့ ရှသေားမြား ကံစမျးနိုငျမညျ့ အခှငျ့အရေး
Si Thu - December 6, 2019 0